The Fives ( 2013 ) - Myanmar Asian TV Channel
2013 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Thriller ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ …
ဂိုအွန်အာနဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေခဲ့ကြရာမှ………….
တနေ့တော့ သူမရဲ့သမီးလေး ဂါယောင်း အသက် ၁၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့ညမှာပဲစိတ္တဇလူသတ်ကောင်၏ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ် …
သူမ မျက်စိရှေ့မှာပဲ သမီးနဲ့ ယောကျာ်းဟာ အသတ်ခံခဲ့ရပြီး သူမလည်းအသက်ဆုံးရှုံးတော့မလို ဖြစ်ခဲ့တယ် …
ကံကောင်းလို့ဂိုအွန်အာဟာသူတစ်ယောက်တည်းလွတ်မြောက်ခဲ့ရပေမယ့် သူမဟာ အောက်ပိုင်းသေနေတဲ့သူအဖြစ် ရှင်သန်ခဲ့ရပြီး လက်စားချေဖို့ လူသတ်တရားခံကို စုံစမ်းနေခဲ့တယ် …
သူမရဲ့ လက်စားချေမှုမှာ ပါဝင်ကူညီပေးဖို့အတွက် သူမရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကိုလိုအပ်နေတဲ့ သူ လေးယောက်နဲ့ အပေးအယူလုပ်ပြီး လူသတ်သမားကို စုံစမ်း ရှာဖွေပါတော့တယ် …
အဲ့လိုလက်စားချေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူမရဲ့ လက်စားချေမှုက အောင်မြင်မလား?
ထို လူလေးယောက်ကကော သူမကို တကယ် ကူညီပါ့မလား?
လူသတ်သမားကပဲသူမတို့ကို အနိုင်ယူသွားမလား? ဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်လေးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် အဖြေထုတ်ကြည့်ပါနော် …
IMDb မှာလည်း 6.5 ရထားတဲ့ thriller ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုပါ …
Actors: Jeong In-gi, Kim Sun-a, Lee Chung-a, Ma Dong-seok, On Ju-wan, Park Hyo-ju, Shin Jung-geun
Openload.co Myanmar 720p Download Soliddrive.co Myanmar 720p Download
Trailer: The Fives ( 2013 )